चीनले कसरी आधाभन्दा बढी भूभागको मौसममा परिवर्तन ल्याउँदैछ ? मौसम परिवर्तन गराउने यस्तो अ*नौठो विधि -
Home News चीनले कसरी आधाभन्दा बढी भूभागको मौसममा परिवर्तन ल्याउँदैछ ? मौसम परिवर्तन गराउने...
चीनले कसरी आधाभन्दा बढी भूभागको मौसममा परिवर्तन ल्याउँदैछ ? मौसम परिवर्तन गराउने यस्तो अ*नौठो विधि
मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गा किनबेचका लागि भूमि बजार (ल्यान्ड मार्केट) स्थापना गरी आधिकारिक निकाय तोकिने जानकारी दिए। यो प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जग्गा किन्ने, बिक्री गर्ने मान्यता प्राप्त निकायबाहेक व्यक्तिले व्यक्तिलाई जग्गा बिक्री गर्न पाउने छैनन् ‘यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन भए घरजग्गा किनबेच हुँदा हुने अनियमितता रोकिनेछ’, उनले भने। भूमि बजार कुन मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय टुंगो लागेको छैन। ‘मन्त्रालयअन्तर्गत रहने या छुट्टै निकाय रहने वा त्यसको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेमा अध्ययन भइरहेको छ’, उनले भने। भूमि बजार सञ्चालन गर्न कार्यविधि, ऐन, नियम र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।
अहिले घरजग्गा व्यवसायीले खरिदकर्ता तथा बिक्रीकर्ता दुवैबाट चर्को मूल्य असुलिरहेका छन्। उनीहरूले जग्गाको मूल्यअनुसार सरकारलाई समेत राजस्व तिर्दैनन्। अब सरकारी मान्यता प्राप्त निकायबाट जग्गाको कारोबार गर्दा हुने ठगी रोकिनेछ।मन्त्रालयले अनलाइनबाटै जग्गा खरिदबिक्री गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बिक्री गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत विवरण वेभसाइटमा राखिन्छ। खरिदकर्ताले मन परेमा उक्त अनलाइनमार्फत नै खरिद गर्न सक्छ। यसरी खरिदबिक्री गर्दा देशभरको जग्गा कारोबारको तथ्यांक राख्न सजिलो हुनेछ।
पछिल्लो समयमा घरजग्गा व्यवसायी संगठित भएर कम्पनीमार्फत कारोबार गर्न थालेका छन्। कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा कारोबारको संख्या कम देखिए पनि सरकारलाई राजस्व बढी प्राप्त हुन्छ। घरजग्गा व्यवसायी विशाल सुवेदीले कम्पनीमार्फत कारोबार गर्दा व्यवस्थित हुने बताए। ‘कम्पनीले राज्यलाई राजस्व पनि तिर्ने भएकाले निकाय खडा हुँदा राम्रो हुन्छ’, उनले भने। अनलाइनमार्फत कारोबार गर्ने व्यवस्था गरे किन्ने, बिक्री गर्ने र मध्यस्थ गर्ने सबैलाई सहज हुने व्यवसायीको भनाइ छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा घरजग्गा कारोबारमा गिरावट आएको छ।
Previous articleखुशीको खबर। कन्चनको स्वा’स्थमा आयो सुधार , 51 औ दिनमा यस्तो हजुरआमाले सकिन्न आफुलाई सम्हा*ल्न।
Next articleभ*र्खरै हेर्नुहोस्, सबैलाई आ*श्चार्य च*कित पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो घोष’णा !PM Kp Sharma Oli